Windows ကို 8 / 8.1 / 10 အပေါ် FSX install လုပ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? - Rikoooo
ရေး Simulator နှင့် add-ons တွေကိုအကြောင်းကိုမေးခွန်းလွှာ
Windows ကို 8 / 8.1 / 10 အပေါ် FSX install လုပ်မထားဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ?
Windows ကို 8 / 8.1 အပေါ် FSX (အားလုံးဗားရှင်း) ကိုထည့်သွင်းဖို့, အောက်ပါအဆင့်တွေကိုလိုက်နာ:
အဒီဗီဒီနှင့်အတူပုံမှန်အားဖြင့် FSX Install 1- ။
2- တပ်ဆင်ပိုင်ခွင့်« fsx.exe » (ဤနေရာတွင်သင်ကရှာတှေ့နိုငျ C: \_ Program Files (x86) \_ Microsoft ကဂိမ်းများ \_ Microsoft ကလေယာဉ်ခရီးစဉ် Simulator X) ကို click, ကျော်ဖြစ်တဲ့အခါ။ ဤတွင်ထို«အသုံးပြုပုံများ» tab ကိုရွေးချယ်အောက်မှာပြထားတဲ့အတိုင်း window ကိုဖွင့်ထား
«၏ 3-bits ဗားရှင်းကို Download လုပ် 32- UIAutomationCore »ဖိုင်ကိုဇီပ်နှင့် FSX ရဲ့အဓိက folder ကို (C: \_ Program Files (x86) \_ Microsoft ကဂိမ်းများ \_ Microsoft ကလေယာဉ်ခရီးစဉ် Simulator X ကို \_) ထဲမှာ paste လုပ်ပါ။ ဒါဟာ FSX ၏မမျှော်လင့်ဘဲပျက်ကျ၏ပြဿနာကိုပြင်ပေးပါလိမ့်မယ်။
ယခုဤအနည်းငယ်သာခြေလှမ်းများနောက်, FSX Windows ကို 8 / 8.1 နှင့် 10 အပေါ်တည်ငြိမ်သောဖြစ်သင့်